Maxkamadda Rafcaanka G/Banaadir oo Safarada ka Mamnuucday Siyaasi Cabdiraxmaan Cabdishakuur | SAHAN ONLINE
Maxkamadda Rafcaanka G/Banaadir oo Safarada ka Mamnuucday Siyaasi Cabdiraxmaan Cabdishakuur
MUQDISHO – Maxkamadda Rafcaanka gobolka Banaadir ayaa maanta waxay burisay go’aankii uu garsooraha Maxkamadda gobolka Banaadir horey uga gaaray dacwaddii loo haystay siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame.
Maxkamadda ayaa maanta u fariisatay kiis dacwadeedka loo haystay siyaasi Cabdiraxmaan Cabdishakuur,waxaana Xeer Ilaalinta qaranka loo fasaxay baaritaanka ay ku haysato kiiska Cabdiraxmaan Cabdishakuur iyo Maxkamadda rafcaanka qaadi karto dacwadan.
Sidoo kale Maxkamadda ayaa waxay safarada ka mamnuucday Mr Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame mudada baaritaanka lagu wado.
Dhanka kale ,waxay Maxkamadda Rafcaanka gobolka Banaadir ay ganaax dul dhigtay sideed qareen oo ay sheegtay in ay diideen difaacista siyaasiga lasoo eedeeyay.
Maxkamadda ayaa shan kamid ah qareenada ku ganaaxday iney bixiyaan lacag dhan$2,000(laba kun oo dollar),waxaana shaqada laga joojiyay muddo laba bil ah,halka saddexda kalena lagu xukumay iney bixiyaan ganaax lacageed oo dhan shiln Soomaali u dhigma $2,000.
Siyaasi Cabdiraxmaan Cabdishakuur weli kama uusan hadlin go’aanka Maxkamadda Rafcaanka ee gobolka Banaadir balse qoraal uu gelinkii dambe ee shalay soo saaray waxa uu sheegay in Maxkamadan tahay mid siyaasadeysan.